Izinkampani zefenisha kuRealtyWW
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Izinkampani zefenisha
Ifenisha isho izinto ezihambisekayo ezenzelwe ukusekela imisebenzi eyahlukahlukene yabantu njengokuhlala phansi (isib, izihlalo, izitulo, kanye nama-sofa), ukudla (amatafula) nokulala (isib, imibhede). Ifenisha isetshenziselwa futhi ukubamba izinto endaweni efanelekile yomsebenzi (njengezindawo ezivundlile ngaphezulu komhlaba, njengamatafula namadeski), noma ukugcina izinto (isib. Izinkomishi namashalofu). Ifenisha ingaba umkhiqizo wokuklama futhi ibhekwa njengendlela yobuciko bokuhlobisa. Ngaphezu kwendima yokusebenza kwefenisha, ingasebenza injongo engokomfanekiso noma yenkolo. Kungenziwa ngezinto eziningi, kufaka phakathi insimbi, ipulasitiki nezinkuni. Ifenisha ingenziwa kusetshenziswa izinhlobo ezahlukene zezinkuni ezibonisa isiko lendawo.